ब्रत बसेको दिन सेक्स गरे के हुन्छ ? यस्तो भन्छ शास्त्र – कामना डेली
Imageयौन र स्वास्थ्यसमाचार
ब्रत बसेको दिन सेक्स गरे के हुन्छ ? यस्तो भन्छ शास्त्र
प्रकाशित मिति २०७५ कार्तिक ४, आईतवार ०८:४८
काठमाडौं । तीजको ब्रत बसेका महिलाले ब्रत तोडेको रात सहवास गर्न हुन्छ कि हुँ दैन ? धर्मशास्त्र र चिकित्साशास्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ फरक-फरक दिइएको छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा मन भगवानमा मात्र लगाउन गरिने उपवासका बेला भोजन र यौन दुबै सोच्नै नहुने विषय हुन् । चिकित्साशास्त्रले भने धर्मशास्त्रले जस्तो कडाइ गरेको छैन।
प्रधानमन्त्रीको नयाँ कीर्तिमान : चतुर्दशीसम्मै दशैँको टीका लगाउन व्यस्त हुने
हृदयघातबाट कुवेतमा नेपाली महिला कामदारको मृत्यु